Bemidina tamin’ny andro alina tao amin’ny Oniversite Boğaziçi, raha ireo mpianatra kosa manohy hatrany ny fanoherany ny fitsabatsabahana amin’ny raharahan’ny campus · Global Voices teny Malagasy
Faha-enimbolan'ny fanoheran'ny ao amin'ny oniversite an'i Melih Bulu notendren'ny fanjakàna
Voadika ny 13 Jona 2021 5:01 GMT
Peace01234 ao amin'ny en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, avy amin'ny Wikimedia Commons
Ity tantara ity dia navoaka voalohany tao amin'ny tranonkala Dokuz8Haber. Dika iray nasiana fanovàna kely no avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Hatramin'ny fiandohan'ny Janoary, ny oniversite Boğaziçi malaza ao Istambul no ivon'ny fampisehoana fanoherana ataon'ireo mpianatra manohitra ny nanendren'ny antoko eo amin'ny fitondràna “Rariny sy Fampandrozoana (antoko AKP )” an'i Melih Bulu, mpiara-dàlana amin'ny governemanta, mba hisolo an'ireo manampahefana voafidin'ny maro teny amin'ny oniversite, tafiditra amin'izany ireo rektora.
Volana enina aty aoriana, mbola mihotakotaka manohitra an'i Melih Bulu, ilay rektora notendren'ny governemanta sy ny pôlitikany ihany ireo mpianatra, alumni ary mpiasan'ny oniversite, izay lazain-dry zareo fa manimba ny kolontsaina demaokratikan'ny ‘campus’ toerana fonenan'ny mpianatra. Ampahany amin'ny fanoherana, mipetraka isanandro manome lamosina ny Rectorat Hall (biraon'ny rektora) ireo mpiasan'ny oniversite.
Na ny filoha Tiorka aza no nanendry an'i Bulu, tsy nanaiky azy ny Loholon'ny Oniversite, araka izany dia tsy ampy fankatoavan'ny maro ny fanapahankevitra raisiny manoloana ny fitsipika mifehy ny oniversite.
Mba hialàna amin'ny filàna ny maro an'isa ao amin'ny Loholona, nanondro tena ho ny zokiolon'ny fakiolten'ny fifandraisana ao amin'ny oniveriste i Bulu, izay vao haingana no namoronana azy tamin'ny alàlan'ny fanapahankevitry ny filoham-pirenena. Naci Inci, izay sady talen'ny Ivontoerana ho an'ny Fianarana Ambony momba ny Siansa sy ny Injenieria, no voatendry ho iray amin'ireo rektora lefitr'i Bulu, ary maro hafa amin'ireo voatendry ho rektora lefitra ihany koa no mitàna toerana isankarazany ao anatin'ny oniversite. Raha amin'ny vanimpotoana ara-dalàna, ireny toerana ireny dia ilàna fifidianana eo anivon'ny ‘campus’ ary fakàna hevitra amin'ireo departemanta ao amin'ny oniversite.
Hatramin'ny Janoary, nisy ireo kaonferansa misokatra ho an'ny rehetra, atrikasa, seho ara-javakanto, kaonseritra sy famoriana tao anatin'ny ‘campus’ nokarakarain'ireo mpianatra, raha ireo fikambanan'ny alumni manerana izao tontolo izao nivoaka avy ao amin'ny Boğaziçi kosa nikarakara hetsika fanehoana firaisankina tany amina tanàndehibe samihafa.
Matetika lasibatry ny hetsiky ny mpitandro filaminana sy ny pôlisy miafina ao amin'ilay toeram-ponenan'ny mpianatra ny zavatra atao ao amin'ny ‘campus’ ao Boğaziçi.
Vao haingana, naaton'i Bulu ny fampianarana omen'ireo mpampianatra miasa amina ampahan'ora. Isan'izy ireny i Feyzi Erçin, mpampianatra iray ao amin'ny departemanta momba ny Literatiora & fiteny tandrefana, izay nitazona kilasy tafiditra amin'ilay Fandaharanasa Fanomezana Sertifika ho an'ny Fianarana mamokatra Sarimihetsika. Omen'i Erçin fanohanana torohevitra momba ny lalàna ihany koa ireo mpianatra nosamborina nandritra ilay bemidina nataon'ny pôlisy.
Taorian'ilay didy fampiatoana navoakan'i Bulu ho an'i Erçin tamin'ny 31 May, nanjohy ireo mpampianatra azy teo ivelan'ny biraon'ny rektora ireo mpianatra, nilaza ny hoe: “Tsy navelanareo ho irery izahay tamin'ny fotoana nilànay anareo, ankehitriny tsy avelanay ho irery ihany koa ianareo.”
Namelatra tranolay teny amin'ireo habaka maitso tao amin'ny ‘campus’ ihany koa ireo mpianatra, ary avy eo voatery namonjy ireo toerana mafy orina rehefa nomen'ny rektora ny baiko handefasana ireo rano fanondrahana tao amin'ny ‘campus’. Satria niditra tamin'ny fametrahana ny tranolay fanoheran-dry zareo tao amin'ny ‘campus’ ireo mpianatra, nivangongo teo anoloan'ny vavahady ireo pôlisy. Avy eo, ny 1 Jona tamin'ny 1 ora maraina, natomboky ny mpiambna ny ‘campus’ sy ny pôlisy miafina ary ireo pôlisy mpandrava korontana ny fidirana an-tsehatra iray voarindra niarahan-dry zareo.
Taorian'ny nametrahan'ireo mpianatra ao amin'ny #BoğaziçiUniversity tranolay ho firaisankina noho ny fapiatoana ireo mpampianatra miasa amina ampahan'ora, isan'ireny i @feyzi_ercin, naparitaka nanoloana ny vavahadin'ny ‘campus’ ireo pôlisy mpandrava korontana sy ny fiara fitazonana ny voasambotra.
Voalaza fa manomana fidirana an-tsehatra ny pôlisy.https://t.co/Fuw5b3gzss pic.twitter.com/uEhz3LGDcq
— dokuz8NEWS (@dokuz8news) 31 May 2021
Mitohy mivangongo eo ivelan'ny vavahady Campus Atsimo ao amin'ny #BoğaziçiUniversity ireo pôlisy satria mbola ao an-tokontanin'ny ‘campus’ miaraka amin'ny tranolainy ireo mpianatra . pic.twitter.com/MY6eF4h4NJ
Taorian'ny nanombohan'ny Tranolaim-Panoherana #BoğaziçiResistance tao amin'ny Campus Atsimo amin'ny #BoğaziçiUniversity hanoherany ny fampiatoana ireo mpampianatra amina ampahan'ora, nanomboka tamin'ny 1 ora maraina ny firotsahan'ny pôlisy.
Ny firotsahan'ireo mpiambina sivily no nanokatra ny firotsahana sasakalina tao amin'ny ‘campus’.https://t.co/NonPGAcsyv pic.twitter.com/NXSvjdah1O
— dokuz8NEWS (@dokuz8news) 1 Jona 2021
Akon'ilay firotsahan'ny pôlisy tao amin'ny Gezi Park tamin'ny 2013 ilay “bemidina misasakalina” tao amin'ny ‘campus’ Boğaziçi, na izany tamin'ny resaka fandrindràna ny fotoana, na ny fanaovana ny hetsika, ankoatran'ny fifanandrifiany tamin'ny fankalazana ny fahavalo taonan'ny hetsipanoherana #OccupyGezi (bodoy i Gezi). Nandritra ilay bemidina, vao maraimben'ny 30 May 2013, nodoran'ireo pôlisy mpandrava korontana ny tranolain'ireo mpanao hetsipanoherana. Nalaky ery ireo mpampahalala vaovao mpomba ny fanjakàna nanakiana ireo mpanao hetsipanoherana noho ilay fandoroana ary niampanga azy ireo ho nanimba fananam-bahoaka.
Marobe ireo mpianatra no nilaza fa naratra noho ny daroky ny pôlisy tamin'iny alina iny tao Boğaziçi, saingy tsy nisy ny mpianatra nosamborina nandritra ilay bemidina.
Raha mizotra mankany amin'ny fifidianana solombavambahoaka i Tiorkia ato anatin'ny roa taona, ny fanoherana tsy mitsahatra ao amin'ny Oniversite Boğaziçi no farany indrindra sy tena marika vao haingana manambara fa tsy ny laza sy fankatoavana ny antoko AKP eo amin'ny fitondràna ihany no very, fa ny fifehezany ihany koa.